Jirama Water III : siniben-drano roa hatsangana | NewsMada
Jirama Water III : siniben-drano roa hatsangana
Hohatsaraina ny famatsian-drano eto Antananarivo sy ny ma­nodidina. Nankatoavin’ny Ante­nimerampirenena sy ny An­tenimi­erandoholona, ny he­ri­nandro lasa teo, ny fanatanterahana ny tetikasa Jirama Wa­ter III, vatsian’ny Banky eoropeanina ho an’ny fampiasam-bola (BEI), ny Vondrona eoropeanina ary ny WSUP ara-bola.
Voafaritr’izany ny fampitomboana hihoatra ny 100.000 m3 isan’andro ny famokaran-drano. Ao anatin’izany ny fa­norenana toby fanadiovan-drano roa vaovao eny Am­bo­hi­tri­manjaka sy Ankadin­dra­tom­bo, afaka hanadio rano 30.000 m3 isan’andro. Hitarina ho afaka mamokatra rano 40.000 m3 isan’andro koa ny eny Man­droseza.
Hohamafisina sy havaozina tambajotra efa misy, hanatsarana ny fantson-drano mirefy 78 km. Hisy siniben-drano miisa dimy haorina, mitotaly 12.000 m3. Hisy toby vaovao mampiakatra ny tosika sady hatsaraina ny efa misy. Hi­ta­rina ny fampidiran-drano vao­vao ho an’ny tokantrano miisa 5.000 sy ny paompy ho an’ny daholobe miisa 400. Mirefy 105 km ny fantson-drano, mitsinjara ho an’ny faritra andrefana, atsimo atsinanana sy atsimo andrefana, atsinanana ary avaratr’Antanana­rivo.
Nankatoavin’ny Antenimi­e­ra roa ity tetikasa Water III ity ary dingana manaraka ny fisafidianana ireo orinasa hanao ny asa isan-tsokajiny.